24 Feb 2020 | सोमबार, १२ फागुन, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण प्राय वृद्ध विरामी र कमजोर स्वास्थ्य भएका मानिसहरूमा
एजेन्सी । चीनमा नयाँ कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित धेरैजसो मानिसहरूमा हल्का प्रकारका सङ्क्रमणका लक्षण भेटिएको चिनियाँ अन्वेषकहरूले बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ नाम दिएको नयाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम प्राय वृद्ध विरामीहरू र कमजोर स्वास्थ्य अवस्था भएका मानिसहरूलाई रहने गरेको पाइएको उनीहरूले बताएका छन् । विस्तृतमा
साउदी अरबले सबैलाई आश्चर्यचकित पार्ने गरी गरेको चमत्कार
सिंगापुरमा किन अपराध हुँदैन ?
मोदीले गरे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वागत
कति छ विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्पत्ति, के के मा छ लगानी ?
दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसको त्रासः एक दिनमै १६१ जनामा देखियो संक्रमण
चीनमा कोरोना भाइरसका कारण मर्नेको संख्या २५९२ पुग्यो
नर्वेको १० सुन्दर पर्यटकिय गन्तब्य
कोभिड–१९ बारे चिनियाँ राष्ट्रपति यसो भन्छन्
कलात । अफगानिस्तानको दक्षिण प्रान्त जाबुलको कारागारमा जेलरको हत्या गरी एकजना तालिबानी फरार भएका छन् । सोक्रममा अन्य दुईजना घाइते भएको एक अधिकारीले सोमबार जानकारी दिएका छन् ।
सामुद्रिक डाँकुद्वारा स्वीस जहाजबाट १२ जना अपहरित
जेनेभा । नाइजेरियाली सामुद्रिक क्षेत्र हुँदै आफ्नो गन्तब्यमा हिँडेको स्वीस पानीजहाजका १२ चालकदलका सदस्यलाई सामुद्रिक डाँकुले अपहरण गरेर लगेको उक्त जहाजको कम्पनीले जनाएको छ ।
त्रिपोलीमा युद्धविराम भङ्ग, राष्ट्रसंघ प्रमुखद्वारा चासो व्यक्त
त्रिपोली, लिबिया । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेर्रेसद्वारा लिबियाको राजधानी त्रिपोलीमा पटकपटक युद्धविराम भङ्ग गरेकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
माले, माल्दीभ्स । माल्दीभ्सका विपक्षी नेता इब्राहिम मोहमद सोलिह माल्दीभ्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । चुनावमा धाँधलीको आशंका गरिए पनि निकै शक्तिशाली मानिएका वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन आश्चर्यजनक रुपमा पराजित भए ।
भियतनामी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति
हनोई । भियतनामका उपराष्ट्रपति डाङ थी नोक थिन्हलाई आइतबार कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाइएको भियतनाम समाचार समितिले जनाएको छ । दुई दिनअघि भियतनामका राष्ट्रपति ट्रान डाई क्वाङको ६१ वर्षका उमेरमा निधन भएको थियो ।
पेरिस । विश्वका आधाभन्दा बढी मुलुकले सन् २०३० सम्ममा दिर्घरोगबाट हुने मृत्युलाई एक तिहाइले कमी ल्याउने राष्ट्रसङ्घीय लक्ष्य पूरा गर्ने सम्भावना नदेखिएको अनुसन्धाताहरुले बताएका छन् ।
उत्तरको सन्देश लिएर कोरियाली राष्ट्रपतिले अमेरिका भ्रमण गर्ने
सिओल । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जाए–इन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेटघाट गर्न आइतबार संयुक्तराज्य अमेरिका प्रस्थान गर्दै छन् । उनले अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच दोस्रो शिखर बैठक गराउन पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राफेल विमानको खरिद रोकिँदैन– जेट्ली
नयाँदिल्ली । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले फ्रान्सेली लडाकू विमान राफेलको खरिद सम्झौतामा कुनै पनि किसिमको घोटाला नभएको स्पष्ट गरेका छन्।
भारत–चीन सम्बन्धमा दरार ल्याउने १५ कारणहरु
भारत–चीन सम्बन्ध बिग्रिनुमा डोकलाम बाहेक अन्य धेरै विवादहरु रहेका छन् । यसबाहेक यी १५ कारण भारत चीनबीच तनाब चलिरहेको छ ।
माल्दीभ्समा राष्ट्रपतिका लागि मतदान सुरु
माले । माल्दीभ्समा राष्ट्रपति चयनका लागि आइतबार बिहानैदेखि देशव्यापी मतदान शुरु भएको छ । मतदानका लागि हजारौं मतदाता बिहानैदेखि विभिन्न मतदान केन्द्रहरुमा उत्साहजनक रुपमा लामबद्ध देखिएको माल्दीभ्सको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
यसकारण रक्सी पिउँदै नपिउँनुहोस्
एजेन्सी । रक्सीको सेवनबाट पनि मानिसको दिमागमा हानी पुर्याउने कुरा हालै गरिएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । थोरै मात्राको रक्सी सेवनले पनि मानिसको शारिरीक र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्दछ ।
भगवान शिवकी छोरी को हुन् ?
माछा खानुको यत्राे फाइदा !
एजेन्सी । साउदी अरब भौगोलिक रुपमा यस्तो स्थानमा रहेको जसमा विकासका कामहरु गर्न निकै कठिन रहेको छ । मरुभूमिमा अवस्थित यो देशले गरेको विकासले विश्वलाई नै आश्चर्यचकित पारेको छ । यो देशमा कुनै स्थायी नदी वा झरना छैनन् तैपनि यो देशले विकासका कार्यमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । देशमा पानी ज्यादै थोरै मात्रामा उपलब्ध छ भने धेरै नै महँगो पनि । देशमा पानीको प्रशोधनलाई लिएर कुनै प्रकारको विकास छैन । तर, पानीको माग लगातार बढीरहेको छ ।
हरेक पटक पिज्जामा थुक्ने व्याक्ति पक्राउ
अचम्मको माछा !
अनौठा कानून रहेका यी ४ देश